The Words online
Home Translations About Us
The Words of Jesus: Fizarana Voalohany
ITY TARANAKA ITY
Fa na iza na iza, no ho menatra Ahy sy ny teniko amin'ireo andron'ny fahotana sy ny tsy finoana ireo dia ho menatra izany olona izany ny Zanak'Olona, raha miverina amin'ny voninahitry ny Rainy miaraka amin'ny anjeliny masina Izy. 1
Mbola tsy mino ihany ity taranaka mpamadika miantsoantso mangataka famantarana ity; fa tsy misy famantarana homena azy afa-tsy ny famantarana izay nomena ny mpaminany Jona. Fa tahaka ny nijanonan'i Jona telo andro sy telo alina tao an-kibon'ilay trozona, dia toy izany koa ny Zanak'Olona hilevina telo andro sy telo alina ao ambanin'ny tany.
Ho avy tokoa ny andro izay hitsanganan'ny mponina tao Ninive, ilay Tanànan'ny Mpangalatra, eo amin'ny fitsarana eo anoloan'ity taranaka ity, ka hanameloka azy ; fa nibebaka ireo tamin'ny toritenin'i Jona, fa amin'izao fotoana izao lehibe noho i Jona no mijoro eto anatrehanareo.
Hiara-hitsangana amin'ity taranaka ity koa amin'ny fitsarana, ny mpanjakavavin'ny Seba ka hanameloka azy ; fa avy tany lavitra be tany izy no tonga mba hihaino ny fahendren'i Solomona, ary indro, tonga eto izay mana-pahendrena noho i Solomona. 2
Ahoana no fomba hilazako ny toetran' ity taranaka ity ? Tahaka ny ankizy madinika mipetraka eny an-tsena izy, izay miantso ny namany : " Efa nitsoka sodina mahafinaritra taminareo izahay, kanefa tsy nandihy hianareo, na nihira. Dia efa nanao hira fanao rehefa misy maty izahay, kanefa tsy nety nalahelo hianareo."
Tonga i Jaona, ilay mpialoha làlana ary nipetraka teo aminareo tamin'ny fampijalian-tena. Hoy ny rehetra hoe : " Misy demonia mihitsy angamba izy io". Tonga eto aminareo izao ny Zanak'Olona, mankamamy ny fiainana amin'ny fahafenoany dia hoy hianareo hoe: " Mpisotro toaka sy tendan-kanina , sakaizan'ny olona ratsy fitondran-tena sy ny mpanota ". Ary manamarina ny fivadibadihana ao anatinareo amin'ny fahendrena ambony sahala amin'izany hianareo. 3
Ry taranaka izay miaina amin'ny fiainana miorina amin'ny lainga : ataonareo izay mpanao ny tsy marina ahoana no fiteny zavatra mendrika ho henoina? Fa avy amin'ny habetsahan'ny ao am-po no itenenan'ny vava. 4
Nony hariva dia hoy hianareo hoe : " Ho tsara ny andro, satria mena ny lanitra. " Ary nony maraina, hoy hianareo hoe : " Ho ratsy ny andro anio, fa manjombona ny lanitra. " Hainareo mihitsy ny mamantatra marina izay ho toetry ny andro. Ka tsy mahay manavaka ny famantaran'ny fiovan'ny andro ve hianareo ? 5
Avia, hianareo rehetra izay reraka, voatsindry ary leo ny fiainana, fa omeko fitsaharana mahafinaritra hianareo! Raiso ny teniko, ary avelao Aho hampianatra anareo, fa malemy paika sady tsara fanahy Aho. Hahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo hianareo amin'ny farany ! Fa tombotsoanareo no angatahiko izany aminareo, ary fahazavana no omeko mba ho entinareo. 6
Izay aminareo nisafidy ny hanaraka Ahy amin'ity taranaka ity dia hipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana indray andro any ary hitsara fanjakana sy ireo izay nanamafy ny fony ka niala tamin'izao tenin'ny fahamarinana izao. 7
FITOERANA HO ANAREO
Handeha hanamboatra fitoerana ho anareo Aho! 1
Aoka ho fantatrareo izao : raha handeha hanamboatra fitoerana ho anareo Aho dia hiverina indray, ary haka anareo hiaraka amiko any; ka mba ho amin'izay misy Ahy dia any koa no hisy anareo. Aza avela hatahotahotra ny fonareo: mino an'Andriamanitra hianareo; minoa Ahy koa. Ao amin'ny tranon'ny Raiko misy lapa soa maro be: raha tsy izany dia nilazako hianareo. Tsy maintsy mandeha Aho, nefa mbola hiverina aty aminareo indray. Raha tena tia Ahy marina hianareo dia tokony hifaly, satria ho any amin'ny Ray Aho : satria lehibe noho Izaho ny Raiko. 2
Ary aza gaga hianareo amin'izay tiako holazaina tamin'ny nitenenako hoe : Tsy ho hitanareo intsony aho fotoana fohy; ary tsy ho ela akory aorian'izany dia ho hitanareo indray Aho. Hitomany sy halahelo hianareo; fa izao tontolo izao kosa hifaly. Ho ory hianareo nefa ho lasa fifaliana ny fahorianareo. 3
Manaintaina sy tahaka ny hiala aina ny vehivahy iray eo am-piterahana; nefa raha vao teraka ilay zazakely dia adinony daholo ny fanaintainany, noho ny hafaliany fa tonga ety an-tany ny zanany. Mety handalo fahoriana mandritra ny fotoana fohy hianareo, nefa ho hitako indray hianareo ary hifaly ny fonareo, ary tsy misy na dia iray akory aza afaka hanaisotra ny fifalianareo aminareo. 4
NY TENY FIKASANA NY AMIN'NY FANAHY MASINA
Ny Fanahy no manana ny hery hanome fiainana. 1
Raha tia Ahy hianareo dia hanaraka ny didiko. Ary hivavaka amin'ny Ray Aho ary Izy hanome anareo Mpampionona anankiray izay hiaraka aminareo mandrakizay. Izy no Fanahin'ny fahamarinana. Tsy mandray Azy izao tontolo izao satria sady tsy hitany Izy no tsy fantany. Fa ho fantatrareo kosa Izy satria hiara-hipetraka aminareo Izy ka ho ao anatinareo. 2
Tsy avelako halahelo hianareo. Fa ankehitriny tsara ho anareo ny andehanako; satria raha tsy mandeha Aho, tsy ho tonga aty aminareo ny Mpampionona, dia ny Fanahy Masina. Halefako aty aminareo Izy raha lasa Aho.
Rehefa tonga Izy dia hampiharihary amin'izao tontolo izao ny amin' ny fahotana, sy ny amin'ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ny fahotana, satria tsy mino Ahy izy ireo, ny fahamarinana satria mankany amin'ny Raiko Aho, ary tsy ho hitanareo Aho ; ny fitsarana, satria efa nopotehina ny hery ratsin'ny andrian'izao tontolo izao.
Manana zavatra maro hafa holazaina aminareo Aho, nefa tsy ho azonareo izany izao. Kanefa rehefa tonga ny Fanahin'ny fahamarinana, Izy no hitarika anareo amin'ny marina rehetra satria tsy hiresaka ny momba ny tenany Izy; fa izay rehetra reny no ho lazainy, hampisehoany aminareo izay rehetra ho avy. 3
Hankalaza sy hanome voninahitra Ahy amin'ny fanehoany ny voninahitro aminareo Izy. Tsarovy : izay voninahitry ny Ray rehetra dia Ahy. Izany no ahafahako manao izao teny fikasana izao aminareo : ny Fanahy Masina no haneho aminareo ny maha-Andriamanitra Ahy. 4
Raha nangataka mofo aminareo ny zanakareo, nomenareo vato ve izy ? Ary raha nangataka trondro aminareo ho haniny ny zanakareo, nomenareo bibilava ve izy? Nomenareo maingoka ve ilay ankizy kely nangataka atody ? Koa raha hianareo aza, eto amin'ity tany ity, mahay manome izay tadiavin'ny zanakareo, tsy mihoatra noho izany ve no hanomezan'ny Rainareo izay any an-danitra ny Fanahy Masina ho an'izay mangataka Aminy ? 5
Rehefa tonga ilay Mpampionona, Ilay Fanahin'ny fahamarinana izay nirahiko ho aty aminareo avy tamin'ny Ray, dia Izy no hanambara ny momba Ahy. Hampianatra anareo ny zavatra rehetra Izy, ary hampahatsiaro anareo izay rehetra nambarako taminareo. 6
FANASANA HO ANY AMIN'NY FIAINANA
Izay rehetra mino ny Zanaka no manana ny fiainana mandrakizay. 1
Nikasa hanao fanasana lehibe ity lehilahy mpanan-karena iray ka nanasa vahiny maro. Rehefa vita ny fanomanana , naniraka ny mpanompony ho amin'ireo izay rehetra nasaina izy nilaza hoe: " Avia fa efa vonona daholo ny zavatra rehetra. "
Ireto nasaina rehetra kosa anefa niala tsiny daholo. Namaly ilay voalohany hoe: " Vao avy nividy tany aho izao ka tsy maintsy mandeha mijery azy indray. Mba ialao tsiny re aho e."
Hoy ilay faharoa hoe: " Nividy omby maromaro aho ka tsy maintsy mandeha mijery azy." Mba ialao tsiny re aho azafady e."
Nisy fahatelo namaly hoe: " Vao avy nanambady vao aho ka tsy afaka manatrika. "
Farany, rehefa niverina ilay mpanompo nitatitra izay rehetra nitranga, hoy ilay tompony nandidy azy: " Mandehana faingana eny amin'ny arabe eto an-tanàna, ka angony ny mahantra, ny kilemaina, ny marary ary ny jamba. "
Dia nataon' ilay mpanompo izany ary niverina izy ka nilaza hoe: " Tompoko efa nataoko izay nasainao natao kanefa mbola misy toerana malalaka eo amin'ny latabatra. "
" Mandehana àry" hoy ilay lehilahy mpanan-karena, "mivoaha indray eny amin'ny lalam-be sy eny an-tsaha ka tereo izay rehetra mifanena aminao hiditra aty mba ho feno ny latabatro. Fa lazaiko aminao: tsy misy na dia iray aza amin'ireny izay nasaina hatramin'ny voalohany ireny no hanandrana ny hanim-pitoloha izay efa namboariko ho azy. "
Izay rehetra mandre ny teniko ka mino an'Izay naniraka Ahy no hanana ny fiainana mandrakizay, ary tsy ho helohina; fa hiala amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Ary aza taitra amin'izany; fa ho avy ny fotoana izay handrenesan'ny maty ny feon'ny Zanak'Andriamanitra, ary ho velona izay rehetra mandre ny feony. Handre ny feony ny maty any am-pasana ka hatsangana; izay nanao ny tsara dia hatsangana ho amin'ny fiainana vaovao, ary ireo izay niaina tamin'ny fahotana dia hatsangana ho amin'ny fanamelohana. 3
Ity no làlana mankany amin'ny fiainana mandrakizay: ny fahafantarana an'Andriamanitra marina sy Jesosy Kristy, Ilay nirahina ho ety ambonin'ny tany! Raiso ao am-ponao ny teniko. Fa notiavin'Andriamanitra tokoa izao tontolo izao, ka nomeny ny Zanany Lahy tokana ho faty, ka na iza na iza mino Azy dia tsy ho faty fa ho voavonjy sy hanana ny fiainana mandrakizay. Ary ho torina amin'izao tontolo izao ity vaovao mahafalin'ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra; izay vao ho tonga ny farany. 4
NY ANDRO FARANY
Lazaiko marina aminareo fa tsy ho lany ity taranaka ity mandra-pahatanterak'ireo zavatra rehetra ireo. 1
Nisy olona iray izay, tompon-tany namboly voaloboka, ary nanao famiazam-boaloboka tao amin'ny taniny. Nasiany fefy avo manodidina ny taniny, ary nanangana tilikambo fiambenana izy. Dia nampanofainy tamin'ny mpikarakara voaloboka izany ka nandeha ho any amin'ny tany lavitra izy. Rehefa nanakaiky ny fotoam-pahavokarana, dia naniraka ny mpanompony nankany amin'ilay mpikarakara voaloboka mba hamory ny anjarany amin'ny tombom-barotra ilay tompon-tany. Fa nanaovan'ireo mpikarakara voaloboka otrika ireo mpanompo ireo ka nokapohiny ny iray, novonoiny ny faharoa, ary noroahany tamin'ny tora-bato ny fahatelo.
Nandefa mpanompo tany fanindroany indray ilay tompony mba hanangona ny anjarany; ka na dia maro noho ny voalohany aza ireo andian'olona nalefany dia mitovy amin'izay ihany no nahazo an'ireo mpanompony.
Farany ny zanany lahy tokana no nalefan'ilay tompon-tany sady izao no tao an-tsainy: " Fara-faharatsiny mba hankatoaviny kosa ny zanako naterako. "
Kanefa raha vao hitan'ny mpikarakara voaloboka nanatona ilay zanany lahy dia nanao teti-dratsy izy samy izy teo hoe : " Ity ilay mpandova. Ka raha vonointsika izy, ho lasantsika daholo ny lovany rehetra. "
Koa tonga dia nosamboriny izy ary notarihin' izy ireo tany ivelan'ny tanim-boaloboka ka novonoiny ho faty. Manontany anareo aho: rehefa miverina moa ny tompon'ity tanim-boaloboka ity, inona no hahazo ireo mpikarakara voaloboka ireo? 2
Ry oloko, ry oloko ô, hianareo izay namono ny mpaminany, ary nanilikilika ireo rehetra izay nirahiko ho ety aminareo, impiry moa Aho no nanangona anareo tahaka ny fanangonan'ny reny akoho ny zanany ao ambanin'ny elany, kanefa tsy nekenareo izany! Indro avela ho foana ny tranonareo; ary tsy hahita Ahy hianareo mandram-pahatongan'ny fotoana izay hitenenan'ny rehetra hoe: " Isaorana anie Ilay avy amin'ny anaran'ny Tompo. " 3
Raha mba fantatrareo mantsy, amin' izao andronareo izao, ny fiadanana mandrakizay izay teo am-pelatànanareo! Kanefa izao, miafina amin'ny masonareo izany. Mihozongozona ny herin'ny lanitra, mihorohoro noho ny tahotra ny fon'ny olona, mieritreritra mialoha sahady ny loza izay ho avy eto ambonin'ny tany. 4
Rehefa tonga ny andro farany, ary hitanareo ny fahavetavetan'ny fandravana izay nolazain'i Daniela mpaminany, " mitsangana amin'ny fitoerana masina ", dia izay no fotoana handosiran'izay rehetra monina eo an-tanàn-dehibe ho any an-tendrombohitra. Aoka izay eny an-tampon-trano tsy handany fotoana hidina haka na inona na inona ao an-trano; ary aoka koa ireo izay rehetra miasa eny an-tsaha tsy hisy hiverina haka ny akanjony. Indrisy, mampalahelo ny vehivavy mitaiza kely amin'izany andro izany! Mivavaha mba tsy ho amin'ny ririnina na ho amin'ny Sabata no handosiranareo: fa hisy fahoriana lehibe izay tsy nisy toy izany hatramin'ny niandohan'izao tontolo izao ary tsy hisy toy izany intsony. Raha tsy nohafohezina izany andro izany dia tsy hisy olona ho velona intsony: kanefa hafohezina izany andro izany noho ny amin'ireo olom-boafidin'Andriamanitra. 5
Fa ho avy ny andro izay hihadian'ny fahavalonareo lavaka manodidina ny mandanareo ka hanodidina anareo avy amin'ny lafiny rehetra izy. Ary hatsipiny eny amin'ny tany hianareo, ary ny zanakareo hiaraka aminareo amin'izany, ka tsy hisy havelany hijanona na dia vato iray hifanongoa amin'ny vato iray aza, ary izany fahoriana rehetra izany noho ny tsy nanekenareo fa Andriamanitra mihitsy no namangy anareo. 6
Hitanareo ve ny hankaton'ny mandan'ny tempoly? Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy hisy na dia vato iray tavela hitsangana! Hohitsakitsahina ao am-paladian'ny jentilisa Jerosalema, mandra-pahatapitrin'ny fetr'andron'izy ireo. 7
Rehefa mandre ady sy fitabataban'ny fandravana hianareo, aza avela ho ketraky ny tahotra ny fonareo: fa tsy maintsy mitranga aloha ireny zavatra ireny; nefa mbola tsy tonga ny farany. Ny firenena hitsangana hanohitra firenena, ary ny fanjakana hanohitra fanjakana. Ary hisy zava-mampatahotra sy famantarana lehibe hiseho eny amin'ny lanitra. Hisy famantarana eny amin'ny masoandro sy eny amin'ny volana ary eny amin'ny kintana. Ary hisy fahoriana lehibe amin'ny firenena eto ambonin'ny tany sy fahaverezan-kevitra ary fidradradradrana tahaka ny onjan-dranomasina mahery. Ary vao maika hitombo ny mosary sy loza amin'atambo maro, ary ny horohorontany. Fa izany rehetra izany no fiandohan'ny fahoriana. Satria ho be dia be ny fahotana, dia hihangatsiaka ny fitiavan'ny maro. 8
Ho fitahina sy ho helohina ho faty hianareo ary ho halan'ny firenena rehetra noho ny anarako. Nefa aoka hiambina sy hivavaka foana hianareo mba ho anisan'ireo mendrika handositra izany zavatra hitranga amin'ny ho avy izany, ary hitsangana indray andro any eo anatrehan'ny Mesia, Ilay Zanak'Olona. 9
Ianàro izay afaka ampianarin'ny aviavy anareo. Rehefa manaroka ny rantsany ka mandravina, dia fantatrareo fa efa akaiky ny lohataona. Tsy misy olona mahalala ny andro marina, na ny ora marina hiverenan'i Mesia; na dia ny anjely any an-danitra aza, fa ny Raiko ihany. Ary rehefa hitanareo fa manomboka tonga ka miseho ireo zavatra rehetra ireo dia ho fantatrareo fa antomotra ny andro. 10
Koa amin'izany miambena, fa tsy fantatrareo ny ora hiverenan'ny Tomponareo.1
Mitandrema mba tsy hisy olona hamitaka anareo; fa amin'ny andro farany, be dia be no ho avy hampiasa ny anarako ka hilaza hoe: " Izaho no Kristy, " ary ho maro no ho voafitany. Hitsangana ny mpaminany sandoka; ary mba hitarika ny maro hino ny laingany koa izy ireo. 2
Aza mino azy ireny rehefa miteny aminareo izy hoe: " Ity misy iray tahakan'i Kristy, na misy karazan'i Kristy iray ary." Fa be dia be no Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana, ka haneho famantarana manaitra sy fahagagana maro. Na dia ny marina aza dia ho voafitany.
Raha hoy izy hoe: " Indro any an'efitra Izy ", aza mihazakazaka mankany hitady Ahy; na raha hoy izy hoe: " Mipetraka any amin'ny toerana miafina Izy ary izaho irery no mahalala izany" aza mino azy. Fa tahaka ny tselatra mamakivaky ny lanitra, manazava ny habakabaka avy any atsinanana mankany andrefana, dia ho tahaka izany koa ny fihavian'ny Zanak'Olona. 3
Amin'ny andro farany hiseho eny amin'ny lanitra ny famantaran'ny Zanak'Olona, ka hahatonga ny firenena eto an-tany hangorohoro; fa hahita ny Mesia izy ireo, ny Zanak'Olona ho avy amin'ny heriny sy ny voninahiny lehibe; ary hahita ny Zanak'Olona mipetraka eo an-tanan'ankavanan'Andriamanitra velona, hiverina eny amin'ny rahon'ny lanitra izy ireo. Ary Izy haniraka ny anjeliny hampaneno mafy ny trompetra; ary hanangona ny olom-boafidiny avy any amin'ny vazan-tany efatra ireo, avy amin'ny fiafaran'ny lanitra sy ny tany tena lavitra indrindra ary hamaly soa ny tsirairay avy araka ny asany. 4
Fa tahaka ny tamin'ny andron'i Noa, toy izany koa amin'ny andro hahatongavan'ny Zanak'Olona. Talohan'ny nahatongavan'ny safo-drano lehibe, nihinana sy nisotro izy ireo, nampaka-bady sy nampanam-bady, ary nanao fety tsy nanana ahiahy mandram-pahatongan'ny andro nidiran'i Noa tao anaty sambo fiara. Tsy niraharaha ny fampitandremana ny amin'ny hahatongavan'ny safo-drano izy. 5
Fa tahak'izany koa tamin'ny andron'i Lota. Nihinana sy nisotro, nividy sy nivarotra, namboly sy nanorina izy ireo. Fa tamin'ny andro izay nialan'i Lota tany Sodoma dia nilatsaka ny afo sy solifara miempo avy tany an-danitra, ka nandringana azy rehetra. Ary tahaka izany koa amin'ny andro isehoan'ny Zanak'Olona. 6
Aza avelanareo ho vesarin'ny fanarahana ny rendrarendran'izao tontolo izao ny fonareo, ny fanaranam-po amin'ny ratsy, na ny fanahiana ny amin'izao fiainana izao. Aza avela hahatratra anareo tsy voaomana ny fiverenako; fa tahaka ny fahatratraran'ny fandrika tampoka anareo no hilatsahany tampoka amin'izay rehetra mipetraka ety ambonin'ny tany.7
Hisy roa lahy hiasa eny an-tsaha. Ny iray ho raisina ny iray kosa havela. Hisy roa vavy izao mitoto-vary. Ny iray horaisina, ny iray havela. Noho izany miambena: fa tsy fantatrareo izay ora hihavian'ny Tomponareo. Nefa aoka ho fantatrareo izao: fa raha nahafantatra ny ora izay novinavinain'ny mpangalatra hamakiany ny tranony moa ireo izay ao an-trano, dia niari-tory izy ary niandry fa tsy hamela ny tranony hovakiana.
Azoko lazaina marina aminareo tokoa izao, be dia be ny mpanjaka sy ny mpaminany naniry hahita ny zavatra hitanareo izao, nefa tsy mba nanana fahafahana hahita azy ireo; ary handre ireo zavatra izay renareo izao, kanefa tsy mba nanana fahafahana handre azy ireo; hianareo nefa nahita ireo faminaniana rehetra ireo tanteraka.
Koa omany ny fonareo; fa amin'ny ora izay tsy ampoizinareo indrindra no hihavian'ny Zanak'Olona. 8
Henoy anie ny tantaran'ireo virijina folo, izay nandray ny jirony ka lasa nitsena ny mpampakatra, hanazava ny làlana amin'ny fahatongavany. Nisy vehivavy dimy hendry sy vehivavy dimy adala tamin'io andiany io. Ary nitondra ny jirony ireo adala nefa tsy mba nitondra solitany ho tehiriziny; ireo hendry kosa nefa nitondra solitany notehiriziny niaraka taminy ho an'ny jirony. Nony nihemotra ny fahatongavan'ny mpampakatra, niha-reraka daholo izy rehetra ka sondrian-tory.
Nony tonga avy teo ny tamin'ny roa ambiny folo alina, injay nisy feo niantso mafy hoe: " Indro manakaiky ny mpampakatra! Tonga ny fotoana hitsenana azy. "
Vetivety teo dia nitsangana ny virijina ka nanomboka nanamboatra ny jirony. Dia hoy ny adala tamin'ny hendry: " Mba omeo kely amin'ny solitany notehirizinareo anie izahay, fa efa lany daholo ny tao anaty jironay. "
" Tsy afaka izahay," hoy ilay hendry " fa tsy ampy anay sy anareo ny solitany aty aminay. Mandehana haingana, fohazy ny mpivarotra solitany ary mividiana solitany ho tehirizinareo. "
Nefa raha mbola lasa nitady solitany izy ireo, tonga ny mpampakatra; ary niara-niditra taminy tao amin'ny fety fampakaram-bady ireo izay rehetra vonona, ka dia nohidina ny varavarana.
Ary fotoana lavalava taorian'izany, tafaverina ireo virijina hafa, ka nanomboka niantsoantso hoe: " Tompo ô, Tompo ô avelao hiditra moa izahay e. "
Fa izao no nolazainy namaly azy: " Lazaiko marina aminareo, tsy fantatro iza moa hianareo" 9
Sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny Tompo vonona sy miandry ny fahatongavany rehefa avy Izy, na amin'ny roa ambiny folo alina izany, na vao mangiran-dratsy. Lazaiko marina aminareo fa hanaovany ny akanjo fitondrany amin'ny fanasana, ka hanasa ny mpanompo sahala amin'izany hipetraka hiara-hisakafo Aminy Izy, ary Izy mihitsy no hitsangana avy eo amin'ny fitoerany handroso hanina ho azy ireo eo an-databatra tahaka ny ho an'ny vahiny manan-kaja.! 10
Koa mitandrema ary miambena hianareo; fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora izay hiverenan'ny Zanak'Olona. Ary aoka hianareo hiaina ny fiainanareo amin'ny fiomanana tsara, ny jironareo amin'izany mirehitra mazava tsara: tahaka ireo mpanompo izay miandry eo am-baravarana, mihaino ny fandondonan'ny Tompony, ary ho hita fa vonona sy liana mialoha ny amin'izany rehefa miverina Izy. 11
Fa ho moramora kokoa ny hahafoana ny tany sy ny lanitra noho ny tsy hahatanterahan'ny ampahany iray monja amin'ireo teny ireo. 12
Ity Taranaka Ity 1. Marka 8:38, 2. Matio 12:39-42, 3. Matio 11:16-19, 4. Matio 12:34, 5. Matio 16:2,3, 6. Matio 11:28-30, 7. Matio 19:28
Fitoerana Ho Anareo 1. Jaona 14:2, 2. Jaona 14:1-3, 3. Jaona 16:19,20, 4. Jaona 16:21,22 Ny Teny
Fikasana ny amin'ny Fanahy Masina 1. Jaona 6:63, 2. Jaona 14:15-17, 3. Jaona 14:18; 16:7-13, 4. Jaona 16:14,15, 5. Lioka 11:11-13, 6. Jaona 15:26; 14:26
Fanasana ho amin'ny Fiainana 1. Jaona 3:16, 2. Lioka 14:16-24, 3. Jaona 5:24,25,28,29, 4. Jaona 17:3; 3:16; Matio 24:14 Ny Andro Farany 1. Matio 24:34, 2. Matio 21:33-39, 3. Lioka 13:34,35, 4. Lioka 19:42; 21:26, 5. Matio 24:16-22, 6. Lioka 19:43,44, 7. Matio 24:2; Lioka 21:24, 8. Lioka 21:9-11,25; Matio 24:7,8,12, 9. Matio 24:9; Lioka 21:36, 10. Matio 24:32,33,36
Ilay Fiverenany 1. Matio 24:42, 2. Matio 24:4,5,11, 3. Matio 24:23-27, 4. Matio 24:30,31; 26:24; 16:27, 5. Matio 24:37-39, 6. Lioka 17:28-30, 7. Lioka 21:34,35, 8. Lioka 10:24; Matio 24:40-44, 9. Matio 25:1-12, 10. Lioka 12:37,38, 11. Matio 25:13; Lioka 12:36,37, 12. Lioka 16:17
Send a friend an email telling them about The Words Site:
Friend's Name: Friend's Email: Your Name:
THE WORDS IS COPYRIGHT-FREE. Permission to duplicate The Words applies to all audio
narrations and/or video on this site. Site Design Copyright ©2003 The Words, all rights reserved.
Site design by Prime Web Design